Ịgagharị The Best Discoveries na College na nwunye | Save A Train
Home > Travel Europe > Ịgagharị The Best Discoveries na College na nwunye
Oge Ọgụgụ: 5 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 25/12/2020)
Mgbe-ejegharị ejegharị na ụlọ ọrụ ndị na mahadum buddies, ọ bụ n'ụzọ zuru okè mma gaghị enwe ihe njegasi na nnọọ ịbụ n'amaghi. Ileta a ebe na-enweghị atụ anya ma ọ bụ ọ bụla tupu atụmatụ bụ n'ezie ụzọ kasị mma isi chọpụta akụ zoro ezo. Ọ doo zuru ụlọ maka fun na uncensored ngagharị. Ya mere, kedu ebe gi na ndi enyi gi bidoro mgbe ichoro ime nchoputa nke oma n’enweghi ihe nlere anya? Olee otú ị pụrụ ịchọta kasị mma nchoputa pụọ ​​n'ụlọ? Gịnị bụ nhọrọ gị?
Ọfọn, kechioma n'ihi na ị, ọ bụ ugbu a kwere omume ime ka a adịgboroja ụgbọ elu ndoputa maka a visa enweghị nwere ụgwọ a ụgbọelu tiketi ma ọ bụ njem njegasi. Na-enye gị ohere njem na-enweghị ihe njegasi. E wezụga nke ahụ, nkà na ụzụ mere map na guidebooks nnọọ mfe, otú i nwere ike n'ụzọ zuru ezu na-adabere na ekwentị gị maka njem Atụmatụ. ebe a na- 5 ọzọ Atụmatụ maka ịgagharị kacha mma nchoputa na mahadum di na nwunye:
Train Transport bụ The Eco-Enyi na Enyi Way To Travel. nkena-isiokwu e dere na-akụziri banyere Train Travel site Save A Train, Ndị dị ọnụ ala Train Tickets weebụsaịtị Na The World.
1. Soro Njeghari Ijeghari
Chọọ na ịdebanye aha maka free na-eje ije njegharị na gị mbụ ụbọchị na n'obodo ọhụrụ. Ha bụ ndị mfe chọta – dị nnọọ ịjụ ndị ọrụ na nkwari akụ ị ga-okodu na mbụ n'abalị, ma ọ bụ ase si ọzọ na-amụrụ njem ị na-ahụ gị mbikọ. Nchọgharị ngwa ngwa na ịntanetị ga-enyekwara gị aka ịchọta ezigbo n'efu na-ejegharị. Cheta na ọ bụ ezie na njegharị bụ isi n'efu, ọ kachasị mma ka ị wepụta obere ego maka ya tipping njem ndu.
Olee otú free na-eje ije njegharị na-arụ ọrụ? Ị na-ahụ a free ije tour maka ụbọchị na oge mgbe ị ga-abụ dị, ị debanyere, a nzute mgbe a na-na-ekwurịta okwu gị, unu na-egosi elu na mgbe ahụ na oge, na mgbe ị na-ahapụ ihe ọ bụla ọzọ na dugharịrị. The adọrọ adọrọ tour ndu ga-enyere gị aka ịmata obodo ahụ na mpụga na ala ma na-enweta a nghọta miri emi nke obodo pụrụ iche ije na obodo omenala.
2. Ekwe Yourself Iji Nweta Lost
Ugbu a, na ahụmahụ dugharịrị enyeworo gị aka ịchọpụta na ọtụtụ akụkụ nke obodo, ọ bụ ugbu a oge na-apụ na a random ojii na ịchọpụta gburugburu na gị onwe gị. Ịkpachara anya na-ezere touristy ebe na "ga-efu" na oké osimiri nke ndị mmadụ. Na n'ihi na ị bụ na ndị enyi, ị na-adịghị echegbu onwe ukwuu banyere nchedo. Ị ga-achọpụta ọtụtụ zoro ezo bara nnukwu uru – ihe dịghị njem nleta rụtụrụla tupu. Ọ ga-enyere ma ọ bụrụ na ị na-emeghe ka okwu na-amabughị n'ihi na ọ dịghị onye ga-enyere gị aka ịmata a obodo mma karịa ndị obodo.
3. Jiri maapụ Google
Maapụ Google ma ọ bụ maapụ Apple dị mma, ọ bụ ezie na Apple enweghị ike iti amụma na izi ezi nke maapụ Google nwere. Ikekwe, ọ bụ n'ihi na ọtụtụ internet ọrụ Android-kwadoro ngwaọrụ, otú ọtụtụ njem nleta ebe reviews na-mere na Google map. Im Google map nke ebe ọrụ n'ezie ọma maka otu na-ejegharị ejegharị – Ọ na-enye a zuru okè echiche nke ihe dị na gburugburu ị. Google reviews ga-agwa gị ebe kasị mma na-eri, ebe ịchọta kacha mma wine, na adọ aka ná ntị gị na ebe bụghị ileta dị ka a na mahadum njem. Nke a na ozi na-enyere gị inyocha na-achọpụta na ihe.
4. Ịga Obodo Ihe
Ọ bụrụ na ị na-achọghị ka na-awagharị na n'okporo ámá na-enweghị a kpọmkwem nzube, gịnị mere na-aga a local omume mgbe? Jụọ gburugburu maka ahia fairs, art egosi, concerts, ma ọ bụ ememme na-emikpu onwe gị na ihe ọ bụla nke ha. Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya egwuregwu, gaa n'ama egwuregwu ma ọ bụ gaa egwuregwu bọọlụ n'okporo ámá. Ị pụrụ ọbụna na na na na ndị obodo ma ọ bụrụ na ha na-ele ọbịa nke ọma ezu. Nke a ga-enye gị a miri emi n'ọnọdụ nke obodo na-ekwe ka ị na-emekọ ihe ndị obodo na-enweta ha kwa ụbọchị siiri na ọṅụ – dị ka a obodo. Gbaa a marathon ma ọ bụrụ na ị na-atụkwasị obi gị na-agba ọsọ ike. Mpi na gị na di na nwunye ga-eme ka ya ọbụna karị fun.
Facebook reviews ga-agwa gị ebe aga backpacking na mahadum enyi, ihe na-achọpụta mgbe e, na ihe niile ị chọrọ ịmara banyere ebe. Naanị sonye kọleji Ndị otu njem ị họọrọ, -asị na Facebook, ma bulie uche nke ihere òtù. Social media bụ a gold m maka achịkọta isi ọmụma si ndị mmadụ na anya ahụmahụ a nyere region.
ikwubi, Kwa ụbọchị bụ a na-amụta ohere maka ìgwè ọ bụla nke oké ọchịchọ na-eto eto na mahadum njem. Dị nnọọ nwere kwesịrị ekwesị atụmatụ maka gị ahụ ike na njem mkpuchi, ma ejedebela njem njem a kara aka. Ka gị ọchịchọ ịmata eto eto onwe inyocha na-achọpụta na ọ bụrụ na ị mmasị isiokwu anyị, mgbe ịtụ gị gbaa ụgbọ okporo ígwè si Save A Train.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “Ịgagharị The Best Discoveries na College na nwunye” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fdiscoveries-college-mates%2F%0A%3Flang%3Dig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Na ndị na-esonụ njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- a njikọ bụ maka English ụzọ gasị ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe pl na fr ma ọ bụ de na ndị ọzọ na-asụ asụsụ nke gị nhọrọ.
I am a business analyst, and a financial instructor who has been researching self-development for the past two years and now is off travelling the world. I am also a marathon runner and have set running the Great Wall Marathon as a lifetime goal! My life mission is to inspire others to live their dreams. - Ị nwere ike pịa ebe a iji ịkpọtụrụ m